Building Construction and Infrastructure: HVAC Control (01) - Chilled Water Fan Coil Units
HVAC Control (01) - Chilled Water Fan Coil Units
Air Conditioning System မှာ အသုံးများတဲ့ Equipment တစ်မျိုး ကတော့ Room Fan Coil Unit ပါ။
သုံးလေ့ရှိတဲ့ Chilled Water Fan Coil Application တွေကတော့။
Constant Volume (Cooling) with Temperature Control
Constant Volume (Cooling) with Temperature & Humidity Control
Multi-Speed (Cooling) with Temperature Control
Variable Speed (Cooling) Control
ဒါကတော့ Air Conditioning မှာ Chilled Water Fan Coil Unit သုံးတဲ့ အခါ အသုံးအများ ဆုံး Configuration ပါ။
တစ်ခါတစ်ရံ BAS Controller အစား Microprocessor ပါပြီးသား ဖြစ်တဲ့ အသင့် FCU Remote Controller ကို သုံးတာလည်း ရှိပါတယ်။
Speed Control (Hi/Med/Low) ကို လိုချင်ရင် Control Panel မှာ ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
အခန်းကို သန့်အောင် လေ ကို Filter နဲ့ ထပ်ခါထပ်ခါ စစ်နိုင်ဘို့ Air Change Rate လိုအပ်တဲ့ အခါ မှာတော့ Single Speed - Constant Volume System ကို သုံးပါတယ်။
အသေးတွေ မှာတော့ Temperature Control က Critical မဟုတ်ခဲ့ရင် Chilled Water Control Valve ကို Modulating မဟုတ်ပဲ On-Off Control နဲ့ တင် သုံးလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Temperature Trend Pattern ကတော့ သိပ်ညီညာနေမှာ မဟုတ်ပဲ Set point နားမှာ လွှသွားလို အတက်အကျ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
Return Air Temperature ( Room Air Temperature) ကို Sense လုပ်၊ Controller ထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ Set Point နဲ့ နှိုင်းယှဉ် ပြီး Chilled Water Flow ကို အနည်းအများ ညှိဘို့ အတွက် Motorized Valve ကို Control လုပ်တာပါ။ Temperature Control က Critical ဆိုရင်တော့ ထိန်းနိုင်ဘို့ အကောင်းဆုံး က PI (Proportional & Integral) Control သုံးဘို့ပါပဲ။
Automatic Control အခြေခံ တွေကို Automatic Control Systems မှာ ဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်။ ဒီစာ ကို မဖတ်ခင် သွားရောက် လေ့လာ စေလိုပါတယ်။
Constant Volume (Cooling) with Temperature Control နမူနာ တစ်ခု ကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
BAS I/O Points Schedule
NO. INPUT / OUTOUT VARIABLES DO AO DI AI
1 RETURN AIR TEMPERATURE 1
2 FAN ON/OFF CONTROL 1
3 FAN ON/OFF STATUS 1
4 FAN TRIP STATUS 1
5 LOCAL/BAS SWITCH MODES 1
6 CHILLED WATER VALVE CONTROL 1
7 CONTROL VALVE POISTION 1
TOTAL : 1 132
Note: Temperature control shall be of PI mode
Point Schedule နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိသင့်တာတွေ ကတော့။
Local Control အတွက် ဆိုရင် တော့ အရေးအကြီး ဆုံး က No. 1 : Room/Return Air Temperature နဲ့ No.6 : Chilled Water Valve Control ဖြစ်ပါတယ်။ PI Mode အတွက် No.7 : Chilled Water Valve Position ကလည်း ပိုပြီး ထိထိရောက်ရောက် ထိန်းနိုင်ဘို့ အကျိုးပြုပါတယ်။
No.2: FAN ON/OFF CONTROL နဲ့ No.5: LOCAL/BAS SWITCH MODES တွေ က Central BMS ကနေ ထိန်းပေးနိုင်ဘို့ အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။
No.3: On/Off Status နဲ့ No.4: FAN TRIP STATUS တွေ ကတော့ Monitoring လုပ်ဘို့ အတွက်နဲ့ ပြဿနာ တစ်ခုခု ရှိရင် Alarm ပေးနိုင်ဘို့ပါ။
ပစ္စည်းတွေ ရွေးချယ်တဲ့ အခါ စဉ်းစားရမှာ တွေကတော့
Flow Characteristic သင့်လျော်ဘို့၊ မှန်ဘို့။
Modulating Valve Drive :
Valve နဲ့ သင့်တော်ဘို့၊
Controller နဲ့ Compatible ဖြစ်ဘို့
Type အမျိုးအစား သင့်တော်ဘို့
Range & Accuracy သင့်တော်ဘို့
Response Time သင့်တော်ဘို့
Reliability (စိတ်ချရဘို့၊ ထိန်းနိုင်တာ သေချာဘို့)
Interface (BAS နဲ့ ချောချောမွေ့မွေ့ ဆက်သွယ် နိုင်ဘို့)
အသေးစိတ် ကို အရင် Post Automatic Control Systemsတွင် လေ့လာပါ။
FCU Off (i.e. Fan Off) (စက်ပိတ်) ထားတဲ့ အချိန်မှာ Motorized Control Valve ကိုလည်း Close (Off) လုပ်ပြီး ပိတ်ခိုင်းဘို့ Interlock လုပ်ပေးရပါမယ်။ (Controller ထဲမှာ Program Logic ကို ဒီလို ထည့်လို့ ရလေ့ ရှိပါတယ်။)
အပေါ်က Control က Space Temperature ကို ထိန်းဘို့ အတွက် အဓိက ပါ။ Humidity ကို အတိုင်းအတာ တစ်ခု အထိတော့ ထိန်းမယ် ဆို ထိန်းလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ Sensible Heat Ratio ကလည်း များမယ် Sensible Heat Ratio = ( Sensible Load / Total Load ) > 0.8 ၊ နောက်ပြီး Space Sensible Load ကလည်း အပြောင်းအလဲ သိပ်မရှိဘူး၊ Humidity Control ကလည်း သိပ် Critical မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အခြေအနေ မျိုးမှာပါ။
ဒီ အခြေအနေ မျိုးမှာ Humidity ထိန်းဘို့ အတွက် အခန်းထဲ က လိုအပ်တဲ့ Dew Point Temperature အထိ ရအောင် ချထားတဲ့ Treated Outdoor Air ကို သွင်းပေးထားရင် Humidity Control က Critical ဆိုရင်တောင် ထိန်းလို့ ရလေ့ရှိပါတယ်။ (အောက် က ပုံ ကို ကြည့်ပါ။ )
Humidity ထိန်းတဲ့ နည်းလမ်းတွေ ကတော့။
Constant Volume Air Supply with Treated Outdoor Air Ventilation (when RSH is high)
Constant Volume Air Supply with Re-Heat Coil (when RSH is low / varies)
Variable Volume Air Supply with Constantly cool coil
အခန်းထဲ မှာ Wet Process ပါလို့ ဒါမှ မဟုတ် လူတွေ သိပ်ကျပ်နေလို့ ချွေးထွက်များမဲ့ အခြေအနေ မှာ Sensible Heat Ratio က နည်းလာပါတယ်။ ဒီအခြေအနေ မှာ Humidity ကိုပါ ထိန်းဘို့ လိုအပ်လာတဲ့ အခါ Constant Volume System ဆိုရင် အရမ်း အေး မသွားအောင် နဲ့ RH တက်မလာ အောင် ထိန်းဘို့ Sensible Heat တင်ပေးဘို့ Re-heat လိုအပ်တာမို့ Heater ထည့်ပေးရပါမယ်။ Thermistor Controlled Electrical Heater က Control လုပ်လို့ ကောင်းပါတယ်။ AHU ဆိုရင် တော့ Condenser Water ကို အသုံးချဘို့ စဉ်းစား ချင့်ချိန်သင့်ပါတယ်။
ဒီအတွက် Heater Capacity Control လုပ်ဘို့ အတွက် BAS point တစ်ခု ထပ်တိုးလာပါတယ်။
8 Electric Heater Capacity Control 1
TOTAL : 123 2
Note: Control shall be of PI mode
Humidity Control အတွက် စဉ်းစားတဲ့ အခါ Process နဲ့ Psychrometry ကို သေသေချာချာ နားလည်နေဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Humidity Control အတွက် Dew Point Temperature 10.8°C လောက်လိုချင် တဲ့ အခါ Chilled Water Temperature က5to 6.5 °C ကသင့်တော်ပြီး 8°C ထက် မြင့်လို့ မရတာ သတိထားပါ။
Variable Fan Speed နဲ့ ထိန်းရင် လည်း အတိုင်းအတာ တစ်ခု အထိ အဆင်ပြေတတ်ပါတယ်။
သဘောတရား ကတော့ Constant Volume နဲ့ အတူတူပါပဲ။ လုပ်လေ့ရှိတာ က တော့ (Thermostat / Control Panel) မှာ Hi/Med/Low Mode ကိုရွေးချယ်ခွင့် ရတာပဲ ပိုပါတယ်။
ဒီ FCU တွေ က သက်ဆိုင်ရာ Manufacturer တွေ ရဲ့ Special Equipments တွေပါ။ အများအားဖြင့် တော့ Remote နဲ့ အတူ Microprocessor Control ပါပြီး အပြင် က သီးသန့် Controller ထည့်ပေးစရာ လိုအပ်လေ့ မရှိပါဘူး။
FCU Fan Drive တွေ က အထူးဒီဇိုင်း လုပ်ထားတဲ့ Motor Drive တွေ ပါ။ (ဥပမာ။ ။ Stepless Motor Drive)
Chilled Water Valve Control: On-Off vs. (PI) Modulating
လေထဲမှာ ရှိတဲ့ ပကတိ ရေငွေ့ ပမာဏ Absolute Humidity (Humidity Ratio) မပြောင်းလဲ တဲ့ အခြေအနေ (Wet Process မရှိတဲ့ နေရာ၊ Storage (သို့) Human Occupancy နည်းတဲ့ နေရာ) ၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရမယ် ဆိုရင် Sensible Cooling / Heating ပဲလိုအပ်တဲ့ အခါမှာ Temperature နဲနဲ လေးပြောင်းတာ နဲ့ Relative Humidity (RH) သိသိသာသာ ပြောင်းတာ ကို တွေ့ရပါမယ်။ (ဒီ အချက် ကို Humidity Control လုပ်ဘို့ လိုအပ်တဲ့ အခါ တိုင်း ထည့်သွင်း စဉ်းစား ဘို့ မမေ့စေချင် ပါဘူး။)
အောက်မှာ Psychometric Chart ကနေ Extract လုပ်ထားတဲ့ ပုံကို ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
ဒီပုံ အရ Room Condition Setpoint 23°C နဲ့ 50% RH အနေအထားမှာ 1°C ပြောင်းတာ နဲ့ 3% RH ပြောင်းသွားတာ တွေ့ရပါမယ်။
ဒါကြောင့် Valve On-Off နဲ့ ပဲ ထိန်းတဲ့ Temperature က Set point အနား အတက်အကျ ဖြစ်တာ မို့ RH က လည်း ဒီလို လှိုင်းပေါ်လာပါတယ်။
PI (Proportional plus Integral) Modulating Control နဲ့ ထိန်းတဲ့ အခါ မှာတော့ Temperature က Set point နားမှာ ကပ်နေပြီး RH ကလည်း ပိုပြီး ငြိမ်နေတာ တွေ့ရပါမယ်။
Sensible Load က တဖြေးဖြေး ဝင်လာ တာ ဖြစ်ပေမဲ့ လေထဲ ကို ရေငွေ့ထည့်တဲ့ Latent Load ကတော့ ချက်ချင်းရောက်ပါတယ်။
Humidity (Latent) Load = Instant Load
ဒါကြောင့် Wet Process (Spray Washing, Steam Fumes, etc. )ရှိတဲ့ အခါ သေသေချာချာ စဉ်းစားရပါတယ်။ လိုအပ်ရင် Local Exhaust နဲ့ Process ကို Interlock လုပ်ပေးရပါမယ်။
Chilled water Valve On တဲ့ အခါ Coil Apparatus Dew Points က အခန်းရဲ့ Dew Point Temperature ထက်နိမ့်မယ် ဆိုရင်) Condensate ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Valve ပိတ်လိုက် တဲ့ အခါ Coil Temperature တက်လာတာ မို့ ပြန် အငွေ့ ပြန်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေ ဆို RH Variation က ပိုတောင် များပါလိမ့်အုံးမယ်။ (ဒီအခြေအနေ အတွက် အထိုက်အလျောက် ဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာ ကတော့ Apparatus Dew Point Temperature က အခန်းရဲ့ Dew Point Temperature ထက် မြင့်တဲ့ Dry Coil ကို ရွေးချယ်သုံးဘို့ပါ။ Chilled Water Supply Temperature ကို လည်း ဒီ Dry Coil နဲ့ သင့်တော်အောင် မြှင့် ပေးရပါလိမ့်မယ်။)
Posted by Ko Chaw - ကိုချော at 4:27 AM Labels: Control, HVAC